Author: Mezikus Aragar
Midha-Daray raggiinaa Duudduub ku liqayow Kolley geedka duuggiyo Taariikh la daastiyo Laga diirto magac hadha Sida diirta xagatoo Dadnimada arradisee Dib maxaa u dhigateen Duniduba ma maantaa?
Intii ay dhul weynaha Raggii dhoofay haysteen Sida awr dhufaanaa Usha laygu dhaqayoo Labadayda dhaban baan mid markay dhirbaaxaan ka labaad u dhigayoo intaas waan dhursugayee inta dhiisha qabada ah wuxuun iigu dhacayaan idinna maa Hadrsawi dhawrtaan? Hadday agaraadam tahay, Hor Illaahay adigiyo Hodan maysku aragteen?
Ummuuraha toosay daawo, Barbarkee ka maqan tahay?
Buurrantu muuniyo Barkhad kaydsan maahee Barar taws ah weeyaan Bugtadiyo xanuunkuna Haddaan baadhay waa ciil Gabagada shabeelow Hooy bara baraalow Waaryaa nin buureed Bulsho waxay ku leedahay Beri waxaan ogsoonaa Adigoon ka soo bixin Casha boholaheedoo Dhirta baaxad-weynta ah Baarkeeda seexdee Maqlay inad bannaanniyo Timi badhaha hawdkoo Bulbullow libaaxii Boqortooyadiisii Duhur ugu badheedhoo Burjigii ka furatoo Bili qaadi weydee Beelahanagtaadaan Kaa soo bariidshoo Budulkay la soo galay Barkintaad ku jiiftee Waxba baadi xoolaad Beryahaas ma kulanteen?
Hadduu umal saaqa yeesho, Maadigaa awoodda leh Taladiyo ummuuruhu Gabsyada sidaad u aragtaa? Abshir-Bacadle gubashada, Jiilaalka gahangaha, Laaskiisu kama gudhin, Rafad gololadiisii, Googgoosyadiisii, Geeduu ku dari jiray.
Waabayda udugga leh Idin laygu shidi jirey Abbaartayda saakana Ma adeeridii baa? Markii Inglan looga yeedhay, Allow yaa ganayada Sida ay u tahay yeela. Godol maanka Yawlaa, Intuu goorba sahansado, Hadba soo ged-kici jiray; Goleyaasha Iidaan, Gudgudkiyo mirtiisii, Weli waa gal shiran tahay; Afay Galayaxiisii, Iyo goolli-baadhkii, Gocashadu dul saarnayd, Hadba soo gudguda-noqoy, Cabdillaahi garangari, Maansada gar-dhaladka ah, Hadba gooddi kala bixi.
Haweenka uleeya maaha, Danaysigu weel u yahay Dhirta waxa ku jira geed Wac wac iyo dhalaal badan Dhulka hoose kama baxo Dhuuni yaalla kama qado Damal dhuumo maaliyo Dhamastii hadhka lahayd Marka dhuuxu ka engego Ma ogtahay dhillowyahan! Go’a lay huwinayaa Ma dhaliil gurracan baa? Hadduu dhaashto jiilaal Ama dhiibsho laamaha Naxariis la kala dhaco Dhardharraanta quruxdiyo Dhaaddanaanta liqanyada Si kaluu u dheegtaa.
In qaawan, intii sawaaban, Iimaanka ku baadi-doona, Dalku lacag ma haystee Shilimada ka soo baxa Qof haddaan la wada siin Qiyaash maashka ugu weyn Miyey qaybsamaysaa?
Ugu dambayn wuxuu Abwaanku hadrxawi, kolley hawsha qiimaha badan leh ee jadraawi, ee aan idiin hayo hal senti oo keliya igu siin maysaan, aniguna idinkuguma ciil qabee, waxa keliya oo aad ixsaan iigu samaysaan, in aad geeridayda kaddib, markaad murtidayda adeegsanaysaan, i xusuusantaan oo aad ii soo ducaysaan.
Maxaa geydha yoontiyo, Gabayooxa ina baday? Laamaha xorriyaddiyo Xayn-daabka calankee Xejinaaya dhalashada Xididkay ka beermaan Xinjir laga waraabshaay.
Xadhkahaad maleegtiyo Sidaan kuugu meel deyey Waxay muujinaysaa Sida aynu Moogow Kala maan u kala-nahay. Wuxuu Hadraawi la jaalyahay dadka maxaysatada ah, kuwa aan marnaba ka tegen hidahooda,iyo dhaqankooda, wuxuu kaloo la jaal yahay dadka diinta u dooda iyo cilmiga wax barashada.
Ragoow irdho qaadan maysid, Isla-weyn qabkeedaa Wiyil aan jaraysnayn Ugu wadha maqaarkoo Lugta webi u geliyee, Haddaan weel gun laga tolin Waayaha adduunyada Xog-ogaal la weydiin Ruuxii gu’kaa weyn Lagu odhan wax ii sheeg Taladaadu wiilooy Dalab waayi maysoo Qofna waari maayee Mudanaha walaalkaa Haddii weerar lagu dilo Isha lalama waabtee Weerkiyo baroorta Dadka lala wadaagaa.
Beer oodanoon Irrid furan lahayn Haddii ubax jacayl Ula sare ku yaal Naf oggoli talooy Illinkee martaa? Ammaaniyo qawl lahayn, Sunbo iyo maraadaa leh Inta sibiq dhaqaaqdaa leh Sagan daaqa jiitaa leh Inta marinka seegtaa leh Waxba aan sugeyn baa leh Inta sharafta saydhaa leh Suuraafta maqan baa hadrawai Xadhig lama sitaan baa leh Saca Faarsa nacay baa leh Barni sumal xadkeedaa leh Heedhe Sahraay heedhe Suugaantu iib maaha Erey iyo sunnee maaha Hugun iyo sitaad maaha Siddi iyo I daya maaha Sadho iyo xajiin maaha Laba saaq ku gado maaha Waxan seylad gelin weeye Sahdi iyo dareen weeye Bulsho saaasaheed weeye Samaheeda mudan weeye Sawdkeeda diga weeye Sacabkeeda tabayada weeeye Marna baadi sooc weeye Sahan iyo tilmaan weeye Dhaxal soo jireen weeye Wax ku saabsan gabayafa weeye So’da iyo ka guro dhuuxa.
U gurbaynta noloshiyo gacan-siinta nabaddiyo gudashada sidii roon maxaa kaa gabaanadey? Wuxuu yidhi dul-badanii “doonnidii la raran jirey ma nafbaa ka daydeen mise wuu dibboodoo dugaag caydha baa helay? Wuxuu Abwaanku sheegayaa inuu yahay amaba ka sii horreeyo Idaacadaha Casriga ah ee ka hadla Hirarka dhaadheer, ee qof kasta halka uu joogo Akhbaarta ugu geeya, Wuxuu Abwaanku ka jawaabayaa Su’aalo fara badan, isagoo tilmaamaya sababtii magaca Hoobal loogu bixiyeywaxa kale oo uu tilmaamayaa, waxa ay yihiin Hiddihiisa, Hantidiisa iyo Hubkiisu iyo waxa uu mustaqbalka horumar la doonayo ummaddiisa.
Maxaan dhilay doog lingaxan Aleelo hadduu ku waasho, Gaagaabka cilinka ah Ma gadaal bax baan ahay? Hadh qabow ma jiiftaa? Mise wuxuu tukanayaa faral iyo Taraawiix?
Ma aqoon ma aqoon Ma aqaanno darkii Isagii han-hinnaa Waxa loo egmadee In dhoweydba sidaas Afartiisa rugood Agab baa la dhigtoo Oommanaa fadhiyee Ifafaalaha guud Abshir baa dhalatee Waxaan awda hayaa Ma ishaara san baa!?
Sowtay hir beeniyo Ku tuseen hillaacee Hogol aan da’ayn iyo Hanfi kuu aroorsheen Hirwo kuu garaaceen Hungo kuugu baaqeen! Bal soo tiri aafadaada, Sakaraad ma lool baa? Maxaad good mariidliyo gungumiyo abeesiyo goodaaddo jilifliyo garangoorri socotiyo inta bahal gurguurtiyo belo igaga guurteen.
Jannada ku aroori maysid, Asaasiran lagu bursado, Hadraawi wuxuu qoray suugaan badan oo ka kooban gabayo, ruwaayado iyo heeso.
Adigoo awoodi doona in aadqaabka aad hadda isticmaalayso ku aragto bogga waxa ku qoran, hadana si buuxda ma kuugu muuqan doono. Selelkaba hurdaa keenta Haba seexan goor baas leh Han sareedo loo waayey In saraayo loo daayo Sida aan u idhi weeye Bela saacaddeed joogta Sabti nabada haw riixin.
Hadduu yahay uur-ka-gaal, Dadkanuu Ilaahay Ka abuuray ciidee Goblantada adduunyadu Ka idlaysay dheehee Dhaxantiyo awaaruhu Araggooda doorsheen, Oday lama wadaagtide Ma cadceed arooryoo ]sagal oogadeediyo agagaarka geesaha kaga taxay aleelaad, uur wada gasheenoo ma cir-jiidha oogtiyo xiddigaha iftiimaad dhalad kula aroortaa.
Ubaxeey Ubaxeey Indh yaab badanaa! Hadduu laba-aabudh saaray,